Fans of Japan ngokuqinile Amazwe ziyazi ukuthi uma izwe futhi kukhona isimo lapho imishini akuyona kunabesilisa kunoma iyiphi ipharamitha - lena Japan. ukukhiqizwa Robot waqala lapha ngo-1986, futhi akagcini kuze kube manje, ukuthuthukisa ngempumelelo futhi akhombise emakethe.
Android Japanese kuyinto wobuciko kweqiniso. Abaklami ngakho wathatheka yokudalwa, bathi kule minyaka yamuva nzima ukuhlukanisa irobhothi kusuka umuntu ophilayo. Laba bantu mechanical dancing, bayahleka, ukukhuluma, ukusekela mpendulwano okunenjongo ngisho kahle kulingisa!
Nokho, eZweni YeJapan kulo mkhakha kukhona izimbangi sina - baseKorea. Android yabo ukuhambisa kancane, kodwa ergonomic kakhulu futhi onekhono. Lokhu kwaholela yokuthi eminyakeni embalwa edlule, amaJapane optic namaqiniso intombazane irobhothi yadalwa. Yena bangaqhubeka inkhulumomphendvulwano ukuthinta, kodwa ngaleso sikhathi kwavela ukuhambisa kuphela engxenyeni engenhla umzimba wakhe.
Kuze kube manje, isimo sesishintshile. Lezi Android kancane kancane esikhundleni izikhonzi bukhoma, ngoba umphakathi Eyamukelwa ezithi azifane sesimanje. Njengoba izibonelo newscaster mechanical nge Tokyo-based izinhlelo zethelevishini ngokungenanjongo noma yokuthengisa umsizi ngesikhathi izimonyo esitolo.
Le ntombazane-irobhothi cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka umuntu ophilayo, ngaphezu kwalokho, it nje kuphela edonsela amakhasimende amasha kanye namakhasimende, futhi ngempela isebenza. Kusukela ngonyaka odlule, iyiphi inkampani enkulu ukuthi ufuna esikhundleni umsebenzi on the Android yimikhuba Ungathenga inthanethi ngokukhetha imodeli engcono phakathi Network ezihlongozwayo.
Japan waziwa hhayi kuphela Android yayo - amarobhothi akuzona nabangane njengoba ethandwayo eyenziwe nge njengenjwayelo zonke izilwane ezifuywayo. Ziklanyelwe izingane kanye nabantu abadala abahlala yedwa, abangekho ukwazi uzithola isilwane ukuze basinakekele.
Ngaphezu izinja namakati (wenziwa enengqondo kakhulu), simulating ukuziphatha umngane ezinezinyawo ezine, kukhona ezifuywayo mechanical ethakazelisa kakhulu. Ngokwesibonelo, tyulenonok Paro, eyenzelwe nokuvuselelwa yezenhlalakahle asebekhulile. Lokhu irobhothi Japanese libukeka ithoyizi ingane futhi ikwazi ukwenza Inombolo yezenzo, futhi ifakwe izinzwa aphendule ngayo uma icindezelwa. Paro ingafaniswa ne Tamagotchi - liphinde idinga ukunakekelwa njalo. Okwenzeka ukusetshenziswa kwalo yabonisa ukuthambekela isimo esihle abantu abadala.
Japan liyaziwa nesiko lako, lapho ukuhlonishwa abadala akuyona indawo yokugcina. Ngenxa yalesi yasungulwa yi-mass yezinto zobuchwepheshe, ezihlanganisa futhi ezihlukahlukene amarobhothi. Ngokwesibonelo, isisebenzi sasendlini - zibukeke akubukeki unjengomuntu, kodwa ncamashi ulingisa Ukunyakaza kwakhe kanye uyakwazi ukwenza imisebenzi elula efana "Letha-asuse" ngaphandle kokushiya into oyifunayo.
Kodwa udumo ezikhethekile Japanese cleaner kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi zokuhlanza - basuke ngokoqobo ukuthatha emhlabeni wonke. Ngakho kangangokuba, ukuthi baseYurophu ukunikeza ubunjiniyela amagama abantu, lokuhlobanisa ke izilwane ezifuywayo. Nokho, kuyaqondakala ukuthi kungani ukusebenza imishini ubuchwepheshe - uma abantu bayeke ukuliqaphela, vacuum cleaner, esikhundleni salokho, bazoyiduba doti.
Lokhu irobhothi Japanese iyathandwa kuphela e-Europe. Land yelanga eliphumayo isikhathi eside teshitsya Android Whakamaru. Uyakwazi hhayi kuphela ukusebenzisa indlu, kodwa futhi ukuze umuntu ahlukanise phakathi abanikazi abantu ukuba bayilinde indlu, isixwayiso lemizamo Hack, ngisho kukukhumbuza izinto, ngoba isichazamazwi irobhothi uqukethe amagama mayelana 15,000.
Iphesenti labantu abadala e Japan iye kokukhulumela phezulu. Laba bantu zidinga ukunakekelwa, okuyinto abakwazi ukunikeza izihlobo amuncwa umsebenzi, nokuthi iqondiswe iningi ezenzekayo wezokwelapha.
Ikakhulukazi ewusizo kusengathiwa ezimbalwa: i exoskeleton of Honda (tyulenonok Paro - ndaba wezandla zabo) futhi irobhothi-umhlengikazi Riba. Ukuthuthukisa Honda kuyinto accessory ngezinyawo. Usebenzela lula kwesikhathi nokuvuselelwa ukulimala waphuka sina, esongela claudication, ukuqinisekisa umthwalo elikhulu ku esitho ngaphandle ubuhlungu.
Japanese irobhothi-umhlengikazi okuhlose esikhundleni ntu ku lo msebenzi nzima. Umsebenzi wakhe oyinhloko - ukusiza abasebenzisi sabakhubazekile ukushintsha kusuka izihlalo kwamanye izingcezu ifenisha. Inama sebuningini izinzwa kanye actuators, olawula ukuziphatha futhi ekuvimbeleni izingozi (ukushayisana noma iconsi).
Sikhungo International amarobhothi Japanese
Njalo ngonyaka ngo Tokyo uhlele ukubonakaliswa izimpumelelo emkhakheni wamarobhothi. Imibukiso enjalo ukuqoqa multimillion izilaleli ayingxenye izivakashi - unomphela. Ngokuvamile akusiyo kuphela abameleli izinkampani ezahlukene, kodwa futhi abantu abavamile, bethatheka Wit kanye Imicabango amaJapane.
Kulo nyaka, embukisweni we amarobhothi ukuze ukunakekelwa kwezokwelashwa, okuyinto seyenziwe kumadivayisi amaningi ezihlekisayo.
On wemiqondo eyisisekelo ewusizo baye babatshela lokho, kodwa siyini isizathu intuthuko enjalo? Kulula: nezibalo yezwe incike izinga lokuphila kuwo. Lokhu ngokwengxenye uboshelwe imizwelo engokwemvelo, ngoba sibi izimo, aba maningi isidingo sokushiya inzalo, ukuvikela uhlanga lwabo ekuqothulweni.
Japan kuyafana - isimo eziphambili kakhulu, ngakho izinga lokuzalwa e kungokuhluke ongaphakeme, futhi nenombolo yokuguga labantu ukhula minyaka yonke, kanye nesidingo self-ukuthuthukiswa kwentsha. Abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna ukusebenzisa amakhono abo engqondo nawokuxoxa lokudala, yingakho kukhona nokushoda kwabasebenzi emkhakheni wemisebenzi. Eqinisweni, i-Japanese robot Android yakhelwe esikhundleni umuntu izikhundla ongaceli.
Kumele ukuthi sekuyisikhathi eside lokhu kwakunjalo emazweni amaningi ophucukile, kodwa lezi amathuba emisebenzi elalihlala izifiki uvuma amantongomane, nje ukuphuma ehlane yayo. Kodwa Japan akababalanga phakathi kwabo, ngoba ihlonipha umlando nesiko, futhi imemori abantu mude izikhathi eziningana ukwedlula kwamanye amazwe. Okuningi eminyakeni engamakhulu amabili edlule ngowesinye isizwe buthule ukugawula endleleni, hhayi nandaba umphakathi, ngoba izwe yelanga eliphumayo isikhathi eside ibe inqubomgomo ovaliwe. Yiqiniso, namuhla , labantu Japan nobungane okuningi kuya "Gaijin" (bakwamanye amazwe), kodwa ukuqasha bona ukusebenza uyavumelana ezimbalwa, futhi kuphela uma wedwa ikhandidethi.
Kuyini kudivayisi ATM
Udinga noma cha ngoba heater igalaji
Usayizi microwave. Uyini solo-eziko, futhi kanjani ukubeka microwave e ikhishi elincane
Uyini halfpipe ku sports ebusika
Ithanga abahlukile, ephekwe eziko
"Mitsubishi-Pajero-Pinin": Uhlolojikelele, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Indlela amanzi okugqumisa amakhowe ekhaya: zokupheka elula izitsha ozithandayo